Daawada dadweynaha | December 2019
Xiddig dahab ah: Guryaha daawooyinka iyo ka hortaga
Rhodiola Rosea, taas oo loo yaqaan "xidid dahab" waa warshad caafimaad leh, oo la mid ah dhismaha bogsashada ee ginseng. Diyaargarasyo ​​ku salaysan dhirtaas waxay noqdeen guul weyn oo ku aaddan dhaqanka caafimaadka waxayna leeyihiin ficil fara badan oo ficil ah. Tilmaamaha Rhodiola Rosea waa geedo badan oo ka mid ah qoyska crassae.
Sauerkraut waa saxan aad u caan ah. Waxaa loo jecel yahay dhadhan wanaagsan, dhadhan, oo leh saameyn cusub. Dad badan ayaa ogaanaya sida wanaagsan ee ay ugu socdaan suxuunta hilibka. Waa wax wanaagsan in la cuno dhirbaaxo mar kasta oo sanadka ka mid ah, laakiin marka ay faa'iido iyo marka ay waxyeello u leedahay jirka, waxaan eegaynaa maqaalkan.
Gaariga cocklebur: Guryaha daawooyinka iyo cuntada sida loo isticmaalo
Ka mid ah dhirta waxtarka leh ee badan waa in ay hal hal warshad ah, isticmaalka taas oo daawada dadweynaha ayaa helay helitaan kala duwan. Waxay noqon doontaa qashinka (gaar ahaan, caadi ahaan), sababtoo ah magaca jilicsan ee cawska ma saameynayo sifooyinka wanaagsan. Sharaxaad Cocktail waa wakiil sanadle ah oo ka tirsan qoyska Compositae oo ku filan.
Ivy: Guryaha dawooyinka iyo ka hortagga
Evergreen damqasho leh caleenta quruxda leh ee aad u qurux badan ayaa si aad ah ugu kalsoonaa soo gelitaanka dhirta ee facades waxayna qabsadeen neshkooda wakhti dheer sida qurxinta aan la karin. Laakiin marka lagu daro soo jiidashada dibadeed, ijsiyada caadiga ah waxaa sidoo kale lagu qiimeeyaa guryaha dawooyinka. Maxay tahay iyo sidee baa loo daaweyn karaa dhirtaas, halka laga heli karo iyo sida loo diyaariyo walxo cayriin ah - waxan ka sheekeyn doonaa dhammaan arrimahan dambe ee maqaalka.
Kiriimyada la qalajiyey: Guryaha waxtarka leh, waqtiga ururinta, goosashada, qalajinta, kaydinta
Meelaha hoose (5 ilaa 40 cm), oo caan ah oo loo yaqaan 'thyme' (oo ah version of Ukrainian - thyme) ma aha oo kaliya weed, taas oo badan oo ka fiirsan, laakiin sidoo kale habka ugu fiican ee la dagaallanka cudurrada kala duwan. Waxaa muddo dheer loo adeegsaday bogsiiyeyaal dad ah, iyaga oo og in sida saxda ah loo diyaariyo qaabka daaweynta, iyo goorta la soo qaato alaabta ceeriin ee shaaha, kuwaas oo cudurada ay ku caawin doonto, sida loo soo saaro cabbitaankan mucjisada ah ee bilowga ah - waxaan ku tilmaami doonaa dheeraad ah.
Codso qulqulka qulqulka qulqulka
Cornflower waa marti aan loo jecleyn beeraha iyo beeraha, halkaas oo ay la halgamaan, sida mid kasta oo weed. Laakiin waqti isku mid ah ubaxkan cawska ah wuxuu u adeegaa ilaha alaabta ceeriin ee daawada dhaqameed, waxaana sidoo kale loo isticmaalaa meelo kale. Tilmaanta iyo sawirada Noocyada qulqulka qaboojiyaha (Centauréa jácea) waa geedo digaag ah oo ka mid ah caleemaha Cornflowers, oo ka mid ah qoyska Astrovie (magac kale - Compositae).
Rootka Burdock: waxa ka bogsanaya, sida loo diyaariyo iyo soo dhasho
Burdock waxaa loola jeedaa dhirta kuwaas oo si guul leh loogu isticmaalay daawada dhaqanka. Waxay leedahay tiro ah sifooyin aad u faa'iido leh, taas oo ay sabab u tahay saameyn togan ku leh xaaladda caafimaadka aadanaha. Badanaa, daawada iyo kondomoolka guriga, waxaa loo isticmaalaa xidid adag.
Suufku waa jilicsan yahay: isticmaal, faa'iido iyo waxyeelo
Beddelka jilicsan ayaa muddo dheer loo yaqaanaa warshad daaweyn ah, oo leh tiro ka mid ah guryaha muhiimka ah waxayna ka caawisaa cuduro kala duwan. Waxaanu bixinaa si loo ogaado nooca cudurada loo daaweyn karo iyadoo loo eegayo geedkaan. Siduu u egyahay iyo meesha uu ku korayo A jiir jilicsan (Latin Gálium mollúgo) waa dakhliyada ka tirsan qoyska Marenov.
Dad badan oo casri ah oo leh dareen xoog badan ayaa la xariira daroogooyinka kala duwan oo ku salaysan alaabta ceeriin iyo cuntooyinka cagaarka ah, taas oo ah, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha ahaatee, si kastaba ha'ahaatee hoos u dhigayaan sifooyinkii wanaagsanaa iyo saameynta cad ee ay ku heleen gargaarkooda. Maqaalkani waxaan ka wada hadli doonaa beerta Gooryaanka, iyo sidoo kale siyaabaha loo daweeyo iyo waxyeelooyinka suurtogalka ah ee isticmaalka.
Qaanska: Guryaha daawooyinka iyo contraindications, daawooyinka loo isticmaalo daawada
Ashareenta cagaaran ama sariirta kareemka ah - waa geedo digaag ah oo loo isticmaalo daawada aan rasmiga ahayn. Waxay leedahay tiro daawo oo faa'iido leh isla markaana waqti isku mid ah ka hortag ah. Qodobkani waxaan ka hadli doonaa sidii si sax ah iyo si ammaan ah u isticmaali karno warshadani daaweyn.
Cherry macaan: guryaha faa'iido iyo contraindications
Cherry Sweet waa sida dhunkashada ugu horeysay ee xagaaga. Waxay ka mid tahay kuwa ugu horreeya ee berry xilliyeedka ee ka muuqda dhirta, waxay ku dhacdaa armaajooyinka, waxayna naga dhigeysaa farxad, waxaanay ku dadaalaysaa jiilaalka, dhadhan fiican iyo fitamiinada hore. Dad badan ayaa awood u leh inay cunaan jeeriga oo tiro badan, iyagoo kalsooni ku qaba inayan wax khasaare ah sameyneynin oo kaliya waxay keenaan faa'iidooyin adag.
Sida loo qalajiyo hawada guriga
Noocan caan ah oo caan ah sida haweenku waa yaqaan qof walba - sidoo kale, waxaa jira halyeeyada ku saabsan dhammaan noocyada sifooyinka wanaagsan ee miraha iyo qaybaha kale. Taasi waa sababta, inta lagu jiro diyaargarowga miraha bogsiinta ee warshadda, dad badan oo u dhashay ayaa waxaa loo diray safar dhab ah isaga. Laakiin dad badan ma ogaan karaan goorta iyo sida loo saxo ubaxa iyo berry ee geedkan, sababtoo ah iyada oo aan, helitaanka ugu badan ee nafaqooyinka ee qalabka ceeriin ma shaqeyn doono.
Qodobbada waxtarka leh ee ciriiriga iyo ka hortagga. Codsiga Turmeric
Turmeric waa geedka basbaaska ah, qaraabo ah sinjiga. Laga soo bilaabo waqtiyadii hore, waxaa loo yaqaana sida huudhka Hindiya waxaana loo adeegsadaa culuumta adduunka. Qodobkani waxaan ka hadli doonaa faa'iidooyinka iyo waxyeelada cayayaanka, hantida iyo codsiyada. Qalabka waxtarka leh Su'aalaha ku saabsan waxa macaanka ah, dad badan ayaa ka jawaabi doona kalsoonida - tufitaanka ayaa sax ah.
Diyaarinta iyo sifooyinka dawooyinka ee Kombucha
Qiyaastii qof kasta oo ka mid ah booska Soviet-ka ayaa aad u yaqaana halyeeyga maanta ee maqaalkeenna maanta, oo leh meel sharaf leh oo bangiyada ku yaala jiko badan. Wakhtigaas, cabitaanka laga helay maaddadani waxay ahayd ficilka kaliya ee lagu beddelay shaaha, waxyaabo caan ah oo mucjiso ah ayaa loo aaneeyay, xayawaanka la qasiqiyay, qaybo ka mid ah ayaa loo wareejiyey si isku mid ah oo isku dayay in uu soo saaro muunad ku habboon oo ku saabsan unuggan.
Birch waa laga yaabaa in geedka ugu ammaan badan gabayada iyo muusikada. Si kastaba ha ahaatee, waxay ku qosleen ma aha oo kaliya midabkiisa aan caadiga ahayn ee jilicsan ama qallajinta dhegaha dhegaha ah - awowayaasheen waxay ogyihiin qiimaha caleemaha bjørk, dheecaan, jilif iyo burooyink. Aynu ka hadalno ku saabsan burooyinka cagaha iyo guryaha dawooyinka maanta. Maxay tahay hodan iyo waxa ku jira feylka Vitamiin: A, carotene, C, PP; Macdanta: magnesium, kalsiyum, birta, naxaasta; asiidh dufan ah; alkaloids; tannins; saponins; phytoncides; glucose; Reinka iyo saliidaha lagama maarmaanka ah; flavonoids: hyperoside, quercetin.
Bariiska Hindiya: Waa maxay faa'iido leh, waxa mujinaya, sida loo diyaariyo loona isticmaalo faleebo
Tan iyo wakhtigii SSCR, dad badan ayaa ka tagay nolol nool oo xiiso leh oo bedeli kara "biyaha macaan" ama caano si ay ugu raaxaystaan ​​raashin xiiso leh oo aan ku raaxeysaneyno isticmaalka. Kombucha, kefir mushroom, iyo bariiska badda Indian waa caan. Waxay ku saabsan tahay maalinta dambe, waana la falanqeyn doonaa.
Guryaha dawooyinka ee jiirka, ama fangas-kuulaha
Waxaa muddo dheer loo isticmaali jiray in lagu daweeyo noocyo kala duwan oo cudurro fangas ah, oo ka qulqulaya geedo bjørk - chaga. Guryaha bogsashada waxaa lagu aqoonsadaa oo lagu dabaqaa daawada dhaqanka. Waanu fahmi doonnaa maqaalka nooca mushaharka uu yahay, halka laga heli karo iyo sida loo isticmaalo. Qeexida fungus Chagoy waxaa loo yaqaan qaabka nadiifka ah ee fangaska fangaska.
Burcadda rinjiga: meesha ay ku nooshahay iyo sifooyinka faa'iidada leh
Reinka soodhawrka waa shey laga helo geedo qallalan; hab sahlan - rinjin. Waxaa sidoo kale loo yaqaannaa baaruud, iyo walaxda adag ee la yiraahdo Barras. Waxaa si sahlan loo daadshey oo loo adeegsadaa ujeedooyin daaweyn, labadaba daawo rasmi ah iyo daaweyn. Waa maxay fiicnaanta walaxdan iyo sida loo isticmaalo, waxaynu sii baranaynaa dheeraad ah.
Spirulina alga: hantida faa'iido iyo khilaafaadka
Dhirta badan oo leh walxo dhir leh oo qiimo leh ayaa loo isticmaalaa daawooyinka dabiiciga ah. Seireed Spirulina, kaas oo leh hodan iyo isku-dhafnaan ku salaysan amino acids, fiitamiinada iyo macdanta, si sax ah u qabsadeen niche ee aaggan. Dhirtaas gaarka ah waxay ku dhowdahay midka kaliya ee ku guulaysatay inuu ku noolaado meerkeena malaayiin sano oo aan isbeddelin.
Timeiha: sharaxaad, guryaha faa'iido leh, isticmaalka alaabta daawooyinka ee warshadda
Nooca Hooyo ayaa na siiyey dhirro badan oo daaweyn kara cuduro kala duwan, laakiin mar walba ma ogaanno sifooyinka bogsashada. In this article waxaan ka hadli doonaa mid ka mid ah dhirta cajiibka ah, taas oo loo yaqaan magaca hoosta - "timeiha". Waxaynu baranaa sida ay u muuqato iyo sida loo isticmaalo ujeedooyin caafimaad.